Kugadzirisana kwekuenderana: WINE mapakeji muchitoro cheSpap? | Linux Vakapindwa muropa
Kugadzirisana kwekuenderana: WINE mapakeji muchitoro cheSpap?
Kana iwe wanga uchinge uchinge uchitsvaga iyo Snapcraft.io webhu kana yeUbuntu app chitoro, iwe zvirokwazvo waona chinhu chimwe. Kune mazita ekushandisa anosanganisira mu kudomwa (WINE). Semuenzaniso, se AniFIX kana se AniTuner. Zvimwe zvirongwa zvandisingazopinde zvakadzama zvavari, nekuti handizvo zvinondinakidza.
Sezvaunoziva, zviri nezve snap mapakeji universal uye izvo zvinogona kuiswa nyore nyore mune chero kugoverwa. Asi chinangwa chechinyorwa chino kuratidza kuti murume uyu akamakwa neshoko reWINE mumabhureki zvinoreva. Ini ndinofunga zvinoenda pasina kutaura kuti zvinoreva kune inoenderana dura yekubvumira yemuno Microsoft Windows software kumhanya pane * nix masisitimu ...
Zvakanaka, kana iwe ukaongorora imwe yeaya maviri mapurogiramu yakataurwa pamusoro, zvinogona kuoneka kuti iwo zvirongwa zviripo kune mamwe mapuratifomu, pakati payo iyo Linux isiriyo. Semuenzaniso, mune kesi yeAnitune, inowanikwa yeIOS, Android, macOS uye zvakare yeWindows. Saka ... chii chinoita kuti pasuru iyi iwanikwe yeLinux?
Zvakanaka ndipo pandanga ndichienda, uye ndizvozvo kuti kune zvimwe zviitiko, seizvi, zve native zvirongwa zveWindows iyo yakarongedzwa pasi pekukasira, yekumhanyisa uye nyore kumisikidza mumastros, asi kushandisa WINE kuti iite kuti ienderane nepenguin chikuva.
Chimwe chinhu icho, neimwe nzira, chinoyeuchidza izvo zviri kuitwa naValve muSteam yayo mutengi ine Windows vhidhiyo mitambo inogona kumhanyisa uchishandisa Proton. Sezvandinotaura, haina kunyatso fanika, asi iwo ruzivo rwunoita kuti hupenyu huve nyore kune vashandisi veLinux pavanoda kushandisa native Windows software. pasina kuomesa hupenyu pamwe nekuwedzera kumisikidza, kuomesa masisitimu, nezvimwe. Iwe unongoisa uye zvinoshanda ...
Kana izvi zvikakura mune ramangwana, zvinogona kureva kubviswa kwezvimwe zvipingamupinyi zvine vamwe vashandisi pavanofunga kushandisa Windows nekuti zvine chokwadi zvirongwa / mavhidhiyo iwo haawanikwe, uye kana ivo vari neWINE, ivo havadi kuomesa kuvapo zvakanyanya. Iyi inhanho kumberi, kuisa pasuru uye voila.
Uye zvakare, inobvisa rimwe dambudziko pakurova sitiroko, uye ivo kusahadzika nezvekuchengetedzwa kwezvirongwa izvi. Rangarira kuvabaya iwo mabhokisi ejecha, uye iri yega uye inogumira, inova yakachengeteka zvakanyanya. Semuenzaniso, PhotoScape iWindows app iyo inowanikwa seyakaipirwa. Iyi pasuru inotova neapp pachayo uye neWINE mapakeji ekupa iwo iwo unowirirana rukoko kuitira kuti ushande sekunge uri mune yechizvarwa system ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Kugadzirisana kwekuenderana: WINE mapakeji muchitoro cheSpap?
Wako mweya akadaro
Izvi zvinotonhorera, uye zvinovimbisa kuti zvirinani pachave nezvimwe zvakakosha win2 zvirongwa zviripo kune linux.
Pindura kune Wako mweya
VLC 4.0 inosvika gore rino, uye dhizaini yacho haizove chete nhau huru